आफै राजनीति गर्ने अनि राजनीति फोहरी खेल हो भन्ने ? – दैनिक अभियान
आफै राजनीति गर्ने अनि राजनीति फोहरी खेल हो भन्ने ?
“उनीहरुको मुखबाट अहिले पनि निस्किइरहन्छ–“फलानोले यो घटनामा राजनीति गर्यो ।”, “ढिस्कानाले त्यो विषयमा राजनीति गर्यो” अर्थात् उनीहरुको बुझाई अहिले पनि राजनीति भनेकै गड्बडी गर्ने हो भन्ने छ ।”
बचपनदेखि नै केहि यस्ता मानिसहरु देखियो, जसले आफै त आजीवन राजनीति गरे, तर आफ्नै बच्चा र अरुसँग पनि दुःख बिसाएको शैलीमा भन्ने गर्थे–“हेर बाबु–नानीहरु हो, राजनीति भनेको फोहरी खेल रहेछ । तिमीहरु झुक्केर पनि यो बाटोमा नलाग्नु ।” तर यति भन्दै गर्दा उनीहरुको अर्को कुरा गरेको मैले कहिल्यै सुनिनि–“राजनीतिलाई असल खेल ठानेर गर्न थालेको तर रहेछ यो फोहरी खेल । मैले त फोहरी खेल भन्ने थाहा पाइसकेपछि छोडिदिएँ, तिमीहरु त झन गर्दै नगर्नु ” न उनीहरुले यसो भनेको सुनियो, न बुझिसकेकको “फोहरी खेल” खेल्न नै छोडेको देखियो । यो भन्दा फोहरी राजनीति के हुन्छ ।
यसबाट उनीहरुबारे दुईवटा निश्कर्ष निकाल्न सकिन्छ–उनीहरुलाई त्यो “राजनीतिक फोहरी खेल”को नशा यसरी लागिसक्यो कि छोड्नै सक्दैनन् तर आफ्ना सन्तानहरुले चाँहि नगरिदिऊन भन्ने छ । त्यसैले उनीहरुको मुखबाट अहिले पनि निस्किइरहन्छ–“फलानोले यो घटनामा राजनीति गर्यो ।”, “ढिस्कानाले त्यो विषयमा राजनीति गर्यो” अर्थात् उनीहरुको बुझाई अहिले पनि राजनीति भनेकै गड्बडी गर्ने हो भन्ने छ । राजनीति गरेरै दाडी जुंगा फुलाइसकेको उसलाई कसले बुझाइदेओस्–मानिस स्वतः राजनीतिक प्राणी हो र अन्तिम शास फेर्नुभन्दा अगाडिसम्म पनि उसले राजनीति नै गर्छ भन्ने कुरा ।
राजनीति आफैमा सुन्दर र फोहरी भन्ने हुँदैन । त्यो कुन उदेश्यका निम्ति प्रयोग हुन्छ भन्ने सवाल हो । आफै सक्रिय राजनीति गर्ने अनि राजनीति फोहरी खेल हो भन्नु सिधा–सिधा फोहरी राजनीति गर्नुको प्रमाण हो । यो प्रशिक्षणले नयाँ पुस्तालाई कि त फोहरी राजनीति गर्ने पुस्ता बनाउँन मद्धत गर्छ कि भने राजनीति भन्ने शब्दसँगै घृणा गर्ने पुस्ता बनाउँन मद्धत गर्छ ।
बरु प्रश्न एउटै हो –“साथी तिम्रो राजनीति के हो ?”
अबको पुस्ताको अगाडि विकल्प के छ त ? राजनीतिसम्बन्धि स्थापित मान्यतमाथि हाकाकाकी प्रश्न गर्दै राजनीतिमा सहभागी हुने । ज्यान ढाक्न त जडौरी कपडाले काम चल्छ तर विचारको जडौर लगाएर स्वतन्त्रताको यात्रा तय गर्न सकिन्न भन्ने मान्यताको विकास गर्ने गराउने । निश्चित जात, खलक, घराना, उमेर समूह र सम्प्रदाय र बोसहरुबाट अपहरित भएको राजनीतिलाई त्यहाँबाट मुक्त गरी आम मानिसहरुको जीवनको हिस्सा बनाउन संघर्ष गर्ने ।
Prevराष्ट्रियताको लागि गोरखा रेजिमेन्ट पनि संघर्ष गर्न तयार भएको सदनलाई जानकारी
Nextबंगलाचुलीमा थप दुईजना कोरोना संक्रमित